Eden Hazard ayaa sheegay inuu horay u go’aansaday inuu ka tago
Eden Hazard ayaa shaaca ka qaaday inuu horay u go’aansaday inuu ka tago
Xiddiga reer Belgian ee Eden Hazard ayaa ka warbixiyay faahfaahin qaas ah ee ku saabsan heshiiskii uu ku yimid Real Madrid, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda reer London ee Chelsea.
Eden Hazard ayaa u saxiixay kooxda Real Madrid heshiis 5 xilli ciyaareed ah, ee gaaraya ilaa iyo 2024, waxaana lagu qiyaasay heshiiska uu ku yimid garoonka Santiago Bernabéu inuu ku kacay aduun dhan 150 milyan euro.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu dhawaan bixiyay Eden Hazard waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Markii uu dhamaaday koobkii adduunka 2018 waxaan doonayay inaan aado Real Madrid, laakiin suurtogal ma aysan noqonin”.
“Inaan sii joogo sannad kale Chelsea waxa ay ii fududaysay in Real Madrid aan si sahlan ugu dhaqaaqo, xilli maamulka Blues ay garteen rabitaankeyga ah inaan baxo”.
“Waxaan la hadlay madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez, wuxuuna ii sheegay inuu i sugayo, kaddib waxaan la hadlay Luka Modrić sidoo kale, waxaan halkaas ka dareemay in qof walba uu doonayo imaatinkeyga kooxda Real Madrid”.
Intaas kaddib Eden Hazard oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sii raaciyay:
“Haddii aad jeceshahay kubbadda cagta, waa inaad jeclaataa Zidane, haddii aad joogtid Real Madrid iyo haddii kaleba”.
“Markii aan yaraa Zidane ayaa ahaa kan ugu fiicnaa aniga ahaan, waxaan doonayay inaan ku arko tababarka si aan wax kaga barto isaga, sababatoo ah taasi way i farxad galineysaa, waa qof daacad ah oo yaqaanna waxa uu doonayo ciyaaryahanka”.